> Resource > Video > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka Nexus 7
Dhawaan, Google ayaa ku dhawaaqay in ay Android 4.4 KitKat ku dhufan doono Nexus oo dhan 7 milkiilayaasha mustaqbalka dhow. Durba for update this? Ma xasuuso inaad gurmad dhammaan xogta ku saabsan Nexus 7 ka hor lagu casriyeeyo, ama aad noqon doontaa xanaaqsan yar laga badiyay xog muhiim ah. Ka hor inta KitKat ee soo socda, bal aynu marka hore la hadal topic kale oo ku saabsan: sida inuu ka soo kabsado tirtiray videos ka Nexus 7.
In Nexus 7 video kabashada
Sida caadiga ah, videos ay ku kaydsan yihiin kaarka SD ama kaadhka xusuusta gudaha gudaha Nexus 7. Marka aad tirtirto video ah, oo kaliya bannaan in ay qaadato kaarka waa la calaamadiyaa sida isticmaali karo. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad ku hayn kartaa xogta cusub ee bannaan ee uu u bedelo video tirtiray. Marka video tirtiray waxaa lagu bedelaa, waxaa si dhab ah weligiis baaba'aa. Waxa kale oo aad dhihi karaa video tirtiray waa kaliya la arki karin ka hor inta ay overwritten iyo aad leedahay fursad aad u weyn si ay u soo kabsadaan.
, Waxaad ka duwan tirka video ah on your computer ma soo celin karaa bin recycle ama qashinka marka aad rabto in aad u undelete. Si aad u soo kabsado videos ka Nexus 7, waxaad u baahan tahay si aad u hesho Nexus 7 qalab kabashada video. Ma aha in mid ka mid ah? Waxaad heli kartaa aan halkan talo: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , software kabashada xogta ee adduunka ee ugu horeeyay ee Android ee dhammaan dadka isticmaala Android. Waxa ay u ogolaataa in aad ka bogsato tirtiray videos, sawiro, fariimaha, xiriirada, music iyo dokumentiyo badan oo telefoonada Android iyo kiniiniyada.
Fiiro Gaar ah: Wixii kale oo isticmaala qalab Android, waxaad samayn kartaa aragto liiska qalabka ay taageerayaan iyo Android halkan .
First of dhan, aynu hubiyo sida tan Nexus kabashada software 7 video u eg:
Diyaari shaqada: Inta aanad bilaabin kabsaday lumay videos ka Nexus 7, waxaad u baahan tahay in ay awood u USB debugging qalab aad.
Haddii aad Nexus 7 waa ordaya Android 3.0 in Android 4.1, waxaad ka taagi karaa sidan: Settings < fursadaha Developer <Hubi debugging USB .
Haddii uu ordaya 4.2 Android ama ka dib, waa wax yar oo dhib badan: Settings < About Phone <Tubada Build tiro dhowr jeer ilaa helo qoraal ah in aad ka yar tahay sameeysa mod <Back to Settings < fursadaha Developer <Hubi debugging USB .
Markaas raac tallaabooyinka hoose si aad u soo ceshano tirtiray videos ka Nexus 7.
Tallaabada 1. Isku aad Nexus 7 oo iskaan
Ka dib markii ay u suuro-debugging USB, hubi in batteriga aad Nexus 7 ka badan tahay 20%. Markaas ordi barnaamijka iyo xiriiriyaan Nexus 7 ilaa kombiyuutarka. Marka aad suuqa kala hoose, guji badhanka Start ay ku bilowdo in aad ka baareyso Nexus 7 videos tirtiray waxa on.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rujin aad Nexus 7, waxaa jiri doona qoraalo ah shaashadda qalab iyo aad u baahan tahay in ay "ogolow" waa waqtiga sawirka. Markaas dib si aad u computer iyo sii iskaanka.
Tallaabada 2. Check oo soo kabsado videos ka Nexus 7
Skaanka aad qaadan doonta muddo yar. Marka uu dhammaado, waxaad eegi kartaa oo dhan videos recoverable ku jirta qeybta Video ah. Waxaad sax karaa category oo dhan oo wada kabsado si aad u computer, ama aad eegista dooran kartaa shayga aad rabto in aad ceshan iyaga. Kaliya dooro sida aad jeceshahay.